Akara mpempekere 10 Nfe Mfe Iji Mee SEO
Ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu banyere ntanetị weebụ na search engine njikarịcha, otu n'ime ihe ndị kachasị emetụ anyị n'obi bụ otu esi ewepụta ibe ma jiri nkọwa meta na isiokwu dị na ọdịnaya anyị . Enwere usoro na usoro dị iche iche ị ga - eji na - elekọta, n'agbanyeghị na ị na - eme ihe na SEO ma ọ bụ pụọ na ibe SEO. Ịntanetị bụ ebe dị ukwuu na ebe nrụọrụ weebụ dị ọtụtụ, n'ihi ya, i nwere ike ịmepụta akara gị na nchọta ọchụchọ naanị ma ọ bụrụ na ị maara otú ị ga-esi kwụsị ndị na-ege ntị.
Nke a bụ ụfọdụ ihe ngwa ngwa site na Jason Adler, Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Ahịa nke Semalt , iji mee ka SEO dịkwuo oke.
№1 Na-emepe Ebe Ndepụta Gị
Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịkwado ndepụta mpaghara gị. Ịdị mkpa dị ezigbo mkpa na Web Wide Web, ọ pụkwara isiri gị ike ka ndị mmadụ nọrọ oge dị ukwuu na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọ bụ ya mere ị ga - eji dọta ha gaa na nkwụsịsọ na-akwụ ụgwọ ma dị egwu - cctv intelligent video analysis. Ndepụta mpaghara nwere nọmba ekwentị, adreesị, ID, na ozi ndị ọzọ dị otú ahụ. Site n'inye ya ndị ahịa gị, ị nwere ike hụ na ha nọ na aka nchekwa na ị dị njikere itinye iwu ha.
№2 Jikwaa njirimara gị
Ọ dị ezigbo mkpa ijikwa aha gị n'ịntanetị. Maka nke a, ị kwesịrị ilekwasị anya n'inweta ọtụtụ nyocha dị mma, nzaghachi dị mma na ntanetịime ntanetị na nyocha ndị na-ekwu maka onwe ha banyere njirimara na ntụkwasị obi gị. Nke a ga - enye engines ịchọpụta echiche banyere otu a pụrụ ịtụkwasị obi ma lekwasị anya na ị bụ maka azụmahịa gị.
№3 Na-emekarị ka ume gị ihe ndepụta
Ị ghaghị ịmeghachi ndepụta ndepụta gị n'otu oge. Ọ bụrụ na ị na-eke ọtụtụ nhazi kwa ụbọchị, ị ghaghị ịhụ na ọ dịghị okwu ọbụla a ugboro ugboro..N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịtọ oge nke izu ma mee ndepụta nke isiokwu ịchọrọ ịchọta na ụbọchị ndị na-abịanụ.
№4 Echebela SEO maka ụlọ ọrụ gị
Ụlọ ọrụ dị iche iche na-edebe SEO maka ụlọ ọrụ ha. Ọ bụrụ na ị na-eme otu ihe ahụ, ka m gwa gị na ị na-eme nnukwu ndudue. Kama nke ahụ, ị ​​ga - etinye oge ụfọdụ na utu aha gị, nkọwa, ọdịnaya ọdịnaya na ihe oyiyi.
№5 Mepụta Ogo Afọ
Anyị enweghị ike ileghara mkpa nke isiokwu dị mma na iji okwu ndị dị na ha kwesịrị ekwesị. Ịkwesighi ịkwasa nza nke dị ala kwa ụbọchị. Kama nke ahụ, ị ​​kwesịrị ị na-elekwasị anya na ibipụta ihe dị mma ma nọgide na-enwe njirimara nke saịtị gị.
№6 Jikọọ Ebe Gị Dị
Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ, ọ ga-adị mma ijikọ ha ọnụ. Ọ bụ otu n'ime usoro SEO kasị mma, ọtụtụ ndị ọkachamara na-akwado ya maka ndị ahịa ha.
№7 Jiri Okwu Gị
Mgbe ị na-eke njikọ, ị ghaghị iji okwu nke aka gị ma kwụsị ịdabere na okwu nke saịtị ndị ọzọ. I kwesiri iji ihe nkpọchi mee ihe mgbe nile ma nyekwa aka na ihe di iche iche nke di iche iche ka ndi mmadu buru otutu ndi mmadu nwere ike itinye aka.
№8 Kpochapụla YouTube YouTube
Ọ bụrụ na ịchọrọ inwe ọkwá dị mma na nsonaazụ ọchụchọ, ị ga-eleghara ọwa YouTube gị anya wee banye na ebe nrụọrụ weebụ gị. Bulite obere vidiyo na ọwa a na Google nwere ike ịnye gị ebe isi ego na ọkwa dị mma. Tinye vidio gị n'ime isiokwu gị iji dọta ọtụtụ mmadụ.
№9 Jide Ebe Ị Na-ahụ Maka Ọha na Aka Buzzing
Otu n'ime ụzọ ndị kachasị mfe iji nweta ihe ịga nke ọma na ịntanetị bụ ebe ndị mmadụ na-eme mkpọtụ. I kwesiri iji Facebook, Twitter, LinkedIn, na Google, nke kachasị mma.
№10 Mobile bụ Key n'ime 2017
Ọ bụ eziokwu na ebe nrụọrụ weebụ na-eji agagharị agafe nwere ike itinyekwu ndị ọbịa. Mee ka saịtị gị nwee mmasị na Google enyi na enyi iji rụpụta ihe dị mma. Google na-enye ọkwa kachasị elu na saịtị ndị nwere ike ịhụ na ụdị ngwaọrụ niile n'ụzọ dị mma.